China 409 409L sheet zentsimbi abandayo liqengqiwe nokwenziwa kunye Factory | IHuaxiao
I-409 insimbi engenasici yongeza umxholo we-Ti xa kuthelekiswa nentsimbi eqhelekileyo engenasici, ebalasele ngakumbi ekusebenzeni kwe-welding kunye nokusebenza. Ihlala isetyenziswa kwimibhobho yokukhupha imoto, izikhongozeli, izixhobo zokufudumeza ubushushu kunye nezinye iimveliso ezingafuneki kunyango emva kobushushu. I-409L inomxholo wekhabhoni ongezantsi kune-409 yentsimbi engenasici kwaye iphezulu ekumelaneni nokubola kunye nokuqina.
Sino Stainless Capacity malunga I-409 409L ebandayo eqengqelwe iityhubhu zentsimbi, 409 409L CRC
Ububanzi: 100mm - 2000mm
Ubude: 500mm - 6000mm
Ubunzima bePallet: 25MT
409 Ibanga elifanayo ukusuka kumgangatho ohlukeneyo welizwe
Icandelo lamaKhemikhali angama-409:
C：.0.08 ，Hayi ：≤1.0 Mnu ：≤1.0 ， S ：-0.03 ，P ：.0.045, iKr ：10.5～11.7 ，Ni ：0.5 Ubukhulu，
409 Iipropati zoMatshini:
Eqine amandla:> 380 MPA
Udibaniso (%):> 20%
Ukugoba i-Angle: i-180 degree
I-409L inqanaba elifanayo ukusuka kumgangatho ohlukeneyo welizwe
Inkcazo: S40903 00Cr11Ti 022Cr11Ti SUH409L
409L Chemical Icandelo:
C：.0.03 ，Hayi ：≤1.0 Mnu ：≤1.0 ， S ：-0.03 ，P ：.0.045, iKr ：10.5～11.7 ，Ni ：0.5 Ubukhulu，
Ipropathi ye-409L yoomatshini:
Inkcazo malunga neeshidi eziqhelekileyo zensimbi ezingenasici
Insimbi engenasici ayibangeli ukubola, ukugabha, ukurusa okanye ukunxiba. Insimbi engenasici yenye yezona zinto zomeleleyo ekwakheni izinto zesinyithi. Ngenxa yokuba intsimbi engenasici ine-corrosion elungileyo, yenza ukuba kube nakho ukwakheka okusisigxina ukugcina ingqibelelo yobunjineli. Isinyithi esine-chromium equlathe insimbi edibanisa amandla oomatshini kunye nokwanda okuphezulu, isenza ukuba kube lula kumatshini ukuhlangabezana neemfuno zabayili bezakhiwo kunye nabayili bezakhiwo.
Ukusetyenziswa malunga sheet steel stainless
Uninzi lweemfuno zokusetyenziswa kukugcina ukubonakala kwesakhiwo ixesha elide. Xa kugqitywa uhlobo lwentsimbi engenasici ezakusetyenziswa, ezona zinto ziqwalaselweyo yimigangatho yobuhle eyimfuneko, ubume obonakalisayo bendawo ekuyo, kunye nenkqubo yokucoca eza kusetyenziswa. Nangona kunjalo, izicelo ezingaphezulu nangaphezulu zifuna kuphela ingqibelelo yolwakhiwo okanye ukunganyanzeleki kwamanzi. Umzekelo, uphahla kunye neendonga ezisecaleni zezakhiwo zeshishini. Kwezi zicelo, indleko zokwakha umnini zingabaluleke ngaphezu kobuhle, kwaye umphezulu awucocekanga kakhulu. Ukusetyenziswa kwentsimbi engama-304 kwindawo engenamanzi ngaphakathi ngaphakathi kusebenza kakuhle. Nangona kunjalo, kwiindawo ezisemaphandleni nasezixekweni ukugcina ukubonakala kwazo ngaphandle, kufuneka zicocwe rhoqo. Kwiindawo zorhwebo ezingcoliswe kakhulu kunye neendawo ezingaselunxwemeni, umphezulu ungangcola kwaye ude uruse. Nangona kunjalo, ukuze ufumane isiphumo sobuhle kwimeko engaphandle, kufuneka i-nickel enentsimbi engenasici. Ke ngoko, i-304 yentsimbi engenasici isetyenziswa ngokubanzi kwiindonga zamakhethini, iindonga ezisecaleni, uphahla kunye nezinye izinto zokwakha, kodwa kwimizi-mveliso enoburharha okanye yolwandle, i-316 yesinyithi iyakhethwa. Izibonelelo zokusebenzisa intsimbi engenasici kwizicelo zolwakhiwo ngoku ziyaziwa. Kukho izikhokelo zoyilo ezininzi kubandakanya i-304 kunye ne-316 insimbi engenasici. Ngenxa yokuba "i-duplex" i-stainless steel 2205 inokumelana nokuqhaqha kwemoya kunye namandla aphezulu okuqina kunye namandla e-elastic, le ntsimbi ifakiwe kwizikhokelo zaseYurophu. Ngapha koko, intsimbi engenasici yenziwa kwiimilo kunye nobukhulu obupheleleyo besinyithi, kwaye zininzi iindlela ezizodwa. Iimveliso ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zenziwe nge-sheet kunye ne-strip yentsimbi, kwaye iimveliso ezizodwa ziveliswa kwiipleyiti eziphakathi nezisindayo, umzekelo, isinyithi esisikiweyo esishushu kunye nentsimbi eyakhiweyo. Kukwakhona ukujikeleza, okwe-elliptical, isikwere, uxande kunye ne-hexagonal welding okanye i-tubes yesinyithi engenamthungo kunye nezinye iintlobo zeemveliso, kubandakanya iiprofayili, imivalo, iingcingo kunye nokuphosa.
Egqithileyo 316L316 Ingqele asongwe Stainless sheet (0.2mm-8mm)
Okulandelayo: I-410 410s ebandayo eqengqelwe iityhubhu zentsimbi
Ingqele asongwe Stainless Sheet
Ingqele asongwe Stainless Sheets
Stainless Ingqele esongwayo Sheet